उपडोमेन, एसईओ र व्यापार परिणामहरू Martech Zone
शनिबार, डिसेम्बर 10, 2011 बिहीबार, सेप्टेम्बर 1, 2016 Douglas Karr
यहाँ धेरै मनपर्दो एसईओ विषय छ (जुन यस हप्ता म फेरि फेला परें): उपडोमेन.
धेरै एसईओ परामर्शदाता उपडोमेन तिरस्कार गर्दछन्। तिनीहरू एक सफा ठाउँमा सबै कुरा चाहन्छन् ताकि तिनीहरू सजिलै अफ-साइट प्रमोशन गर्न सक्छन् र त्यस डोमेनलाई अधिक अधिकार प्राप्त गर्नमा ध्यान दिन सक्छन्। यदि तपाईंको साइटसँग बहु डोमेनहरू छन् भने यसले लिने कामलाई गुणा गर्दछ। अर्को शब्दहरु मा, यदि तपाइँ जुवा खेल्न जाँदै हुनुहुन्छ ... तिनीहरु चाहानुहुन्छ कि तपाई यसलाई एक हातले जुवा गर्नुहुन्छ। यहाँ समस्या छ ... कहिलेकाँही यसले तपाईंको साइटलाई सबडोमेन गर्न पूर्ण अर्थ राख्छ।
वास्तवमा, केहि गुणहरू जुन गुगलको प्रख्यातबाट पुन: प्राप्ति भएका छन् पांडा अपडेट सबडोमेनमा बदलियो। ती मध्ये एक साइट थियो Hubpages। प्रयोग गर्दै Semrush, हामीले कुञ्जीशब्दहरूको संख्या विश्लेषण गर्‍यौं जुन हन्डपजेस पंडा हिट हुनु भन्दा पहिले र पछाडि रेकर्ड गरिएको थियो र त्यसको उप-डोमेनमा तिनीहरूको पछिल्लो चाल।
यदि तपाइँ सबै ब्रान्डेड कुञ्जी शब्दहरूलाई एकपटक राख्नुहुन्छ भने, Hubpages शीर्ष श्रेणीकरण अब सबै कीवर्ड-आधारित क्वेरीहरूमा छन्! यहाँ यसमा केहि छलफलहरू छन्:
गुगलले भनेको छ "ट्रिलियन सबडोमेन फूल्न दिनुहोस्"
Hubpages बाट पांडा फिक्स
सबडोमेन: गुगल पाण्डा पर्गरेटरी बाहिर हबपेजेस मार्ग?
के तपाईं ती लेखहरूमा छलफल भएको कसैलाई देख्नुभयो? रूपान्तरित दर or व्यवसाय परिणाम? हो ... म पनि हैन।
यो सामग्री फार्म र पांडाको बारेमा मात्र होईन। उप-डोमेनहरूले तपाईंको साइटको एक प्रभावकारी बिछोडको लागि अनुमति दिन्छ, स्पष्टता प्रदान गर्दछ र त्यहाँ सामग्रीमा फोकस गर्दछ। जब तपाईं टुक्राईनुहुन्छ र सबडोमेनमा तपाईंको साइट पासा, तपाईं हुनेछ सायद तपाईले सामग्री सार्दा रैंकिंगमा हिट लिनुहोस् र यातायात पुनः निर्देशित गर्नुपर्नेछ। तर लामो समय मा, तपाईं संभवतः हुन सक्छ राम्रो र्याकिंग प्राप्त प्रासंगिक कुञ्जी शब्दहरूमा, ड्राइभ अधिक यातायात तपाईंको साइट को माध्यम बाट सजिलो, र अधिक लक्षित प्रयोगकर्ता अनुभव प्रदान गर्नुहोस् जुन तपाईंको पाठकहरूलाई प्रभावकारी ढ effectively्गले खण्डहरू र समग्र रूपान्तरण दरहरूमा सुधार गर्दछ।
सबडोमेन एसईओ को लागी खराब छैन, उनीहरु यसको लागी राम्रो हुन सक्छ ... यदि तपाई एसईओ पाउने बारे विश्वास गर्नुहुन्छ भने व्यवसाय परिणाम। तर सबडोमेन लागू गरेर, SEO सल्लाहकारहरूलाई थाँहा छ कि उनीहरूले सडकमा तल लात हान्दैछन्। त्यसोभए ... के उनीहरूले निर्णय लिने छन् कि केहि नतीजाहरू चाँडै वा राम्रो परिणाम पछि प्राप्त हुन्छन्? यदि उनीहरू भुक्तान जारी राख्न चाहन्छन् भने, तिनीहरूले सायद सजिलो सडक लिनेछन्।
लक्ष्यीकरण एक प्रभावकारी मार्केटिंग रणनीति हो जुन उद्योग भरि प्रयोग गरीन्छ। हामी परिवर्तनको बतासहरू देख्दैछौं, यद्यपि। गुगललाई थाहा छ कि अत्यधिक सान्दर्भिक, लक्षित सामग्री एक महान रणनीतिको लागि कुञ्जी हो ... यो उनीहरूको खोजी ईन्जिनमा निर्मित थियो। थप al०० एल्गोरिथ्म समायोजन जुन उनीहरूले एक बर्ष बनाउँदछन्।
त्यसोभए तपाईं केहि गर्नुहुनेछ तिरस्कार लक्षित सामग्री र प्रयोगकर्ता अन्तरक्रिया?
अर्को उदाहरण को आक्रमण को छ अनौपचारिक त्यो छ बिल्कुल केहि छैन वास्तविक व्यापार संग गर्न। एसईओ केटाहरू एक महान इन्फोग्राफिक मन पराउँछन् किनकि यो भाइरल हुनेछ र कम्पनीले धेरै संख्यामा ब्याकलिंक्स पाउनेछ र उनीहरू रैंकिंग र ट्राफिक बढाउँछन्।
वा यो थियो ...
अहिले तपाईसँग धेरै ट्राफिकहरू छन् जुन रूपान्तरण गरिएको छैन। बाउन्स दरहरू माथि छन्, रूपान्तरणहरू तल छन् ... तर तपाईं अझ राम्रो क्रममा हुनुहुन्छ - विशेष गरी सर्तहरूको समूहमा जुन तपाईंको व्यवसायसँग केही गर्न सक्दैन।
मेरो विचारमा, तपाईंले भर्खर गर्नुभयो क्षतिग्रस्त तपाईको खोज इञ्जिन प्राधिकरण र अप्टिमाइजेसन किनकि तपाईले खोज ईन्जिनलाई भ्रममा पार्नुभयो भन्ने सोचमा तपाईंको साइट यस्तो हुन सक्छ। मँ बजाइएको एक अप्रासंगिक एक भाइरल इन्फोग्राफिक भन्दा एक उद्योग विशेष इन्फोग्राफिक को एक मनलाग्दो स्वागत छ। किन? किनकि यसले मेरो उद्योगमा मेरो अधिकार र प्रतिष्ठा केन्द्रित गर्दछ। एक लक्षित साइट जहिले पनि एक सामान्य एक प्रदर्शन हुनेछ… र म एक तंग समुदाय को सामाजिक प्रभाव मा जाने छैन।
यदि मेरो ग्राहकसँग विभिन्न विषयहरू छन् जुन प्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्धित छैन, म उनीहरूलाई सबडोमेनमा सर्न, हिट लिन, र उनीहरूको उद्योग, उत्पादनहरू र सेवाहरूको वरिपरि केन्द्रित एक उच्च केन्द्रित रणनीति निर्माण गर्न सल्लाह दिनेछु। यदि तपाई सबै पछि र्याक र ट्राफिक हो भने, सबडोमेन सम्भवतः पारीह हुन्। तर यदि तपाईं पछि हुनुहुन्छ व्यवसाय परिणाम, तपाईं दोस्रो हेराई लिन चाहानु सक्नुहुन्छ।
उद्योगमा हामी मध्ये जो ग्राहकहरूको रूपान्तरण प्राप्त गर्नमा काम गर्छन् उनीहरूले खेल्न सक्ने भूमिका बुझ्छन्। तपाईं सबडोमेनलाई अर्को मौका दिन सक्नुहुन्छ।
टैग: व्यापारव्यवसाय परिणामडोमेनएसईओसबडोमेन एसईओउपडोमेन
मार्टेक अब गुगल प्रवाहमा उपलब्ध छ